မသိသူကျော်သွား..သိသူဖော်စား ~ White Angel
10:39 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 33 comments
“ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်” “ချဉ်ပေါင်ကြော်”...လို ဆိုလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများအားလုံးဟာ “ဂလု ဂလု” ဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးကွာနေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ချဉ်ပေါင်ကြော် ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်ခြောက်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော မိမိတို့ရဲ့ မိသားစုများမှတဆင့် မှာယူစားသောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှ မြန်မာလူမျိုးများကတော့ နေရာအနှံ့မှာ သဘာဝပေါက်ရောက်လျှက်ရှိသော ဆိုက်ပရပ်စ်ချဉ်ပေါင်များကို အလိုရှိသလို ခူးယူစားသုံးနိုင်ကြပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံတွင်သာမက တချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပါ ပေါက်ရောက်လျှက်ရှိသော ထိုအပင်ကို ဆိုက်ပရပ်စ်ဘာသာစကားဖြင့် “စီနိသ်ကာ”(Ksinithkia) ဟုခေါ်သည်။
“စီနော့ဂ်” (Ksino) ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “ချဉ်သော“ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အသဲပုံသဏ္ဍာန်အရွက်(၃)ရွက် ခေါင်းချင်းဆိုင်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီး အနီ နှင့် အစိမ်း ၊ အရောင်(၂)မျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အပင်ပုမျိုး(တနည်းအားဖြင့်) မြေကြီးမှ အမြင့် တထွာခန့်သာရှိသည်။
အရွက်များမှာ ပါးလွှာပြီး နူးညံ့သည် ။ အဝါရောင်ပန်းပွင့်သော ဆိုက်ပရပ်စ်ချဉ်ပေါင်ရွက်၏ အရသာမှာ မြန်မာပြည်မှ ချဉ်ပေါင်ရွက်၏ အရသာနှင့် ၉၀%ဆင်တူသည်။
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ ဆောင်းတွင်းဖြစ်သော နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ လများတွင် နေရာအနှံ့တွင် မျက်ခင်းစိမ်းကြီးသဖွယ် အလေ့ကျ ပေါက်ရောက်လေ့ရှိသော ဆိုက်ပရပ်စ်ချဉ်ပေါင်များ၏ အကြောင်းကို တင်ပြရင်း တခြား တခြားသော နိုင်ငံများမှ ချဉ်ပေါင်ဟင်း၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်များကို လွမ်းဆွတ်တောင်းတနေကြသော မြန်မာသူငယ်ချင်းများအတွက် လက်တို့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ရပါတယ်..။
Posted in: ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှ ဗဟုသုတများ
အဲဒီက ချဉ်ပေါင်ကို အခြောက်လှမ်းပြီး ကျုပ်တို့ဆီကို တစ်ထုတ်လောက် ပို့ပေးပါလားကွယ်...
ဟယ်ပျော်စရာကြီး... ချဉ်ပေါင်နဲ့ ၉၀% တူတဲ့ အပင်ရှိတာ ကောင်းလိုက်တာနော်... ဒီမှာတော့ လူကြုံပါမှစားရတား(
သြော်. . . .
တို့နေတဲ့ နိုင်ငံဂျားဆိုတာကြီးကတော့ တို့ရွာက ဘာဂျီး သာဒွန်းရဲ့ နှမ မဖော့အူတောင်ရှိတယ်.။
မမ ရော ချဉ်ပေါင်ဟင်းချက်မစားဘူးလား
အဲဒီအရွက်အကြောင်း ရေးဖူးတယ်။ တရုတ်တွေက ကံကောင်းခြင်းအပင်လို့ခေါ်တယ်။
“ပေါင်းမြက်တွေကြားမှာ ပေါက်နေတဲ့ ကံကောင်းခြင်းအပင်ဆီက ၄ရွက်ဆိုင် အရွက်မျိုး ၃ ပင် ဆက်တိုက်တွေ့ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ပထမဆုံး တွေ့ဆုံရတဲ့လူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်”
ဗဟုသုတတွေတိုးပွားအောင် ဖြည့်စွက်ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မနိုင်းရေ...
စီဘောက် မရှိလို့ ဒီမှာပဲ ထပ်အော်သွားပြီ...
အဟီး . .အော်မဲ့လူ မရှိလို့ အလုပ်ပဲ အလုပ်များချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ပျင်းနေတာ . .
အခုတော့ အပေါ်ကို နှိပ်နှိပ် အောက်ကိုပဲ နှိပ်နှပ် ...
ကြိုက်သလို နှိပ်ပြီး မန့်နိုင်ပါပြီ...
သူ့အသီးက ရုံးပတီသီး ပုံစံလိုလား
သေးသေးရှည်ရှည်နဲ့လေ.. အဲလိုပုံဆိုရင်တော့ အစ်မတို့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလဲ ရှိတယ်.. အလေ့ကျပေါက်တယ်.. အသီးရော အရွက်ရော ချဉ်ချဉ်နဲ့ဟင်းလဲချက်စားကြတယ်..
အဲ အနီရောင် မရှိဘူး အစိမ်းရောင်ဘဲ ရှိတယ်..
ဒီမှာတော့ ဝယ်လိုရတယ်ဗျ...။အဲဒီမှာတော့ ရှားမှာ....။
မ​မေ​ရ... ပုံေ​လးေ​တွေ​တွ့ေ​တွ့​ချ​င်း ဒီ​အရွ​က်ေ​လးေ​တွြ​မင်ဖူး​ပါ​တယ်လို့​ ထ​င်ေ​န​တာ။ မ​နို​င်း​နို​င်ြးေ​ပာ​သ​လို​ဘဲ ဒီ​မှာ​လ​ည်း အဲ့​အရွက်ကို အလွာေ​လး​ရွက်ပါ​တာ​ကို ရှာေ​တွ့​​ရ​င် ကံေ​ကာ​င်း​တယ်ဆို​လား ဘာ​ဆို​လား...
မမ​တို့​​က စား​လို့ေ​တာင်ရ​တာ​ဆိုေ​တာ့ ကံေ​တွ​အများြ​ကီးေ​ကာ​င်း​တာေ​ပ့ါေ​နာ်... ：）
အညိုေ​ရာ​င်ေ​လး​ကေ​တာ့ မြ​မင်ဖူး​ဘူး။ သူ​ကချ​ဥ်ေ​ပါင်ရွက်အေ​ရာင်နဲ့​ ပို​ဆင်တ​ယ်ေ​နာ်...
January 16, 2011 at 10:21 AM
လောလောဆယ် ရန်ကုန်က ယူလာတဲ့ ချဉ်ပေါင်တွေတော့ ကျိုခဲပြီးစားတာ ကုန်သေးဘူး..
ကုန်ရင် မတို့ ဆိုက်ပရပ်က လူကြုံမှာမယ်နော်.
အဲလို အပင်တော့ မဟုတ်ဘူး..
ဒါပေမယ့် နော်ဝေမှာလဲ ချဉ်ပေါင်ရှိတယ်ဗျ..
နွေမှ ပေါက်တယ်..အလေ့ ကျအပင်ဘဲ..သူလဲ ၉၀%
ဘဲ..။ တစ်ကယ်ကို တူတာပါ..။
နောက်ကြုံမှ ဓါတ်ပုံပို့ ပေးမယ်..။
January 16, 2011 at 6:47 PM
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာကတော့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေကို ကုလားဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရပေမယ့် အဲဒီပုံထဲက ချဉ်ပေါင်ရွက်လေးကို ချက်စားကြည့်ချင်တယ်
အသည်းပုံလေးတွေဆိုတော့ ချစ်သူတွေအတွက် သီးသန့်ချဉ်ပေါင်လို့ နံမည်ပေးရမယ်းD
ဒီမှာတော့မြန်မာတွေချဉ်ပေါင်ကြိုက်တာသိလို့ စလုံးအဖွားတစ်ယောက်က ချဉ်ပေါင်ရောင်းလို့သူများတွေလိုစီးတီးစေဟောသွားစရာမလိုတော့ဖူးလေ ချဉ်တဲ့အရသာကိုနှစ်သက်တော့ စားဖူးချင်တယ်။
ဟုတ်တယ် မနိုင်းနိုင်း ပြောသလိုပဲ..။
ဒီမှာတော့ ကံကောင်းခြင်း သစ်ရွက်လေ..။
အဲဒီသစ်ရွက်ပုံဆံကိုယူပြီး တစ်ချို့တွေ လတ်ဝတ်ရတနာတွေ လုပ်ကြတယ်။
နိုင်ငံခြားချဉ်ပေါင်ရွက်လေးက သိပ်လှတာပဲ ဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပြီး တင်ဦး....။
clover ပင်လေးတွေက အလေ့ကျပေါက်တယ်။ အရွက် ၃ရွက် ပုံမှန်ထက် ပိုရင် ကံကောင်းတယ် ဆိုလို့ အချိန်ကုန်ခံ ရှာဖူးပါတယ်။
မြက်တွေ လိုပေါက်ပြီး လူတကာ နင်းသွားတာမို့ မစားချင်ဘူး။ တခါတလေ ခွေးတွေက မစင်စွန့် ကျင်ငယ်ပါ စွန့်တော့ မစားတာ ကောင်းမှာပါ။
sour leaf ဆိုတာ တမျိုး ရှိတယ် အရွက်ကသရက်ရွက် နဲ့ ဆင်တယ်။ ပိန်းလိုစုပြုံပြီး ခြုံလိုပေါက်တာ။
ချဉ်ပေါင်က ဗိုက်နာအုန်းမယ် sour leaf ကဗိုက်မနာဘူး။ တချို့ ကကိုးရီးယားချဉ်ပေါင် ခေါ်ကြတယ်
မမနတ်သမီးကို နာလိုတော့ဘူးချင်--သူကြဘာပဲရေးလိုက်ရေးလိုက် ကွန်မင့်တွေအများကြီး ရတယ်။ ဟင့်။
ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်း ပြေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းသွားလာရင် လုယက်သူတွေဘာတွေရှိလားဗျ .အဲမှာ...။ တော်ကြာ ...
နေရာတိုင်းမှာ ဒုစရိုက်ဆိုတာ ရှိကြပေမယ့်
ကျမနေတဲ့ ရပ်ကွက်ဟာ Touris Aera ဖြစ်နေတာက တကြောင်း၊
ကမ်းခြေပေါ်က စားသောက်ဆိုင်များရဲ့ ညအိပ် ညနေ လုံခြုံရေးအတွက်
ည၆နာရီမှ မနက် ၆နာရီအထိ လုံခြုံရေးတွေချထားတာကြောင့်
လုယက်သူ လူဆိုး တွေရဲ့
လူ လူချင်း လုတာ သိပ်မကြားဖူးဘူး၊ ဘဏ်ဖောက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်။
အပျော်စီးသင်္ဘောတွေဟာ ခရီးသည်များအတွက် စတင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အတွက် လူစည်နေပါပြီ။
ကမ်းခြေတလျှောက်မှာဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်များဟာလည်း နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များနဲ့ တစတစ စည်ကားလို့နေပါပြီ။
ပြီးတော့ မနက်၆နာရီဆိုရင် နေက စထွက်နေပြီလေ..
ကမ်းခြေမှာ ညီမလိုပဲ အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ..
အားကစားဝတ်စုံ အဖြူရောင်လေးဝတ်ပြီး ကမ်းခြေပေါ်က ခုံတန်းရှည်လေးတခုကို ပတ်ပြေးနေတာ ဆိုက်ပရပ်စ်က နမ်းမဝပါပဲ..(ဟီး)
ကမ်းခြေပေါ်က ခုံတန်းရှည်ကို ပတ်ပြေးမနေနဲ့.. တစ်ခွက်လောက်ကစ်လိုက်... အပေါ်ကအရွက်ကို ကြော်ပြီး မြည်းလိုက်... အမောတောင် သက်သာသေးတယ်.. အမူးလည်းယဉ်တာပေါ့...ခုံပတ်ပြေးတော့ မမူးပဲမော တာပေါ့အေ... ဂွီ။
အစ်မရေ.. နောက်တာနော် (မသင့်တော်ရင်ဖျက်ပါဗျ)
သူများ အားကစားလေ့ကျင့်နေတာကို ဖျက်လိုဖျက်စီးလိုက်လုပ်နေပါတယ်..
ဂျပန်မှာတော့ မြန်မာတွေက စိုက်တာနော်။ အိန္ဒိယ က လာတဲ့ ချဉ်ပေါင်ကုလားဒယ်လည်းရှိတယ် GONGURA (HIBISCUS CANNABINUS)PICKLE
လူမိုက်ရှာတာတော့ မလုပ်နဲ့ နော် လစ်တမတ်စက္ကူတော့ အရောင်ပြောင်းမှာ သေချာတယ် စတာနော် မတင်သင့် ရင် မတင်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ
လူကြီးတယောက်ကပြောဖူးတာ သူကို ဦးချတာ အဆိပ်ရှိမရှိ စမ်းတာလားတဲ့ သူတကယ်ပြောတော့ မှတ်မှတ်ရရပဲ
အပတ်တိုင်း နားရက်တွေချဉ်ပေါင်ကြော်သွားသွားယူလို့ မနော်ယဉ်မွှေးက ညီမလေးနောက်အပတ်ဆိုချဉ်ပေါင်ကြော်မရတော့ဘူးနော်တဲ့ နှုတ်စရာမကျန်အောင်ကုန်ပြီးတဲ့....ဟင့်..ဟင့်..စိတ်မကောင်းဘူး..ဆောင်းတွင်းဆိုတော့လူစုံအောင်မတွေ့ရတာ မုန့်လုံးရေပေါ်လုံး မလို့လည်းခုထိမလုပ်စားရသေးဘူး။မမပျော်ရွင်ပါစေ.....အချိန်တိုင်း....း)
သုတဖြစ်စရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် မအဖြူရောင်ရေ. ကျွန်တော်အားပေးခဲ့ပါတယ်
အနော်တို့ နိူင်ငံက ချဉ်ပေါင်ပင်တွေလိုလည်းကဗျာ
မဆန်ပါဘူးဗျာ သူတို့ အရွက်သာမန်အပင်အရွက်လိုဘဲ
(ကဗျာရေးသူ.. ကြယ်စစ်သည်)၏ Not for sale ကဗျာမှ
နေ့တွေကို စွဲချိတ်ထားတဲ့ နန်းမှာ၊ တချို့ပန်းတွေက
အရောင် ပြောင်း တယ်၊ အရောင်း ပြ တယ်။
ခေါင်းစဉ်ဟာ ဒီနေရာမှာ စတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆုံးတယ်။
မဟောင်းသေးတဲ့ ကဗျာဟာ ငါ ဖြစ်တယ်။
Aperture21 | Lives Beyond The Light
Hotel Life (14)
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှ ဗဟုသုတများ (19)
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှ သတင်း (5)
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှ သမိုင်းတချို့ (16)
နတ်သမီးလက်ရာ စားကြည့်ပါ (7)
မိသားစု ခံစားချက် (10)
အဖြူရောင်နတ်သမီး ဘလော့ဂ်(၁)နှစ်ပြည့် (3)
အဖြူရောင်နတ်သမီး ဘလော့ဂ်(၂)နှစ်ပြည့် (1)
အဖြူရောင်နတ်သမီး မွေးနေ့ (17)
အဖြူရောင်သံစဉ် အွန်လိုင်းရေဒီယို(၅)နှစ်ပြည့်ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ (1)
အပျော်တန်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဗီဒီယိုပုံရိပ်များ (10)